Sagantaa Kamisa Sadaasa 11, 2021 - Independent Oromia
Uummanni hidhanno-maleessi xiyyaaraan haleelamaa jiraachuu
Haleellaan humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa dhukaafamaniin, Uummata Oromoo hidhannoo-maleessa Walloo, keessattuu, kanneen qarqara magaalotaa gandeen baadiyyaa keessa jiraatan irratti fuuleffachuun raawwatamu jabaatee itti-fufuu.
Haaluma kanaan, haleellaa Magaalaa Sambatee fi gandeen baadiyyaa naannawa san jiran irratti guyyaa ha'aa raawwatamaa oleen, lubbuu fi qabeenya Uummata Oromoo Walloo irra gaaga'amnii fi mancaafamni jabaan dhaqqabuu.
Bobbaa LMKII fi haala rakkisaa Uummanni Oromoo keessa jiru
Loltoonni Mootummaa Koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa kanneen daangaa impaayerattii fi Sudaan irra turan humni guddaan tibbana gara Giddu-galaa fi Kaaba Oromiyaatti bobbaafamuu.
Daafii kanaanis, dararaa fi ajjeechaan Uummata Oromoo, akkasumas, mancaafamni qabeenyaa Oromoo irratti, Konyaa Salaalee, Ona Dagam keessatti raawwatamu daran jabaatee jiraachuu.
Odeessa biraatiin, aayyoo ulfaan jirtu tokko dabalatee, Oromoonni shan, torbee darbe Onuma Dagam keessatti, mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamuun, reeffi isaanii bakkeetti gatamuu.
Sagantaa Kamisa Sadaasa 11, 2021